Home » Photography » ရှေ့နေ ကောင်းကင် ရဲ့ အစိမ်းရောင်
ဒါ့ပုံ Show အရော
ဟွာလေ. ပိုင်းးလော့ လို့ စာရိုက်ရှာတိုင်းး ပိုင်းလော့ ဆရာတော် FB ပေ့ခ်ျတွေပဲ ကျကျလာလို့ လက်အုပ်လေးးချီချီပြီးး ပြန်ပြန် ပိတ်ရတယ် …
အပေါ်ကလင့်က မြင်မရလို့… ဖြည့်/ရှာထည့်လိုက်ကြောင်း..
ဒါလေးးက လည်းး အသန့်အဗပြာင်လေးး
ဟယ် ဒီတယောက်ကမဆိုးဘူးနော် တောင်ကြီးကဆိုပါလား စိုင်းစိုင်းတို့နဲ့ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေပေါ့ အားပေးရမှာပေါ့လေ
ဒီ ကြားထဲ ဟာသညာဏ်လေးက ရှိသေးးးး
အောင်မလေးလေး……..လေယာဉ်မောင်းရင်း ဆဖီးရိုက်နေတာလားငင်။ တားက လေယာဉ်ဆို စီးရတာ သိပ်ကြောက်တာ။ :O
မေပြည့်စုံအောင်ကတော့ အခုအရမ်း Hot နေတာပါ….။ ငယ်ရုပ်လေးနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်လိုလေးဖြစ်ဖြစ် ကြည့်လို့ကောင်းနေတာပဲလေ…။ မျက်နှာကတော့ သိပ်မထူးခြားပေမယ့် ဘော်ဒီကတော့ ကိုကိုများ ခိုက်ချင်စရာ..(Slim များသာ လိုလားသူများကို ဆိုလိုပါတယ်.)
အရောင်တကာ့ အရောင်ထဲမှာ .. ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးအရောင်က အစိမ်းပါ….
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့ ယှဉ်လိုယှဉ် …30 year old Co-pilot ကြီးနဲ့ယှဉ် …ဟိုကကလေးပဲရှိသေးတာကို …ဘာပဲပြောပြော …ဘယ်လိုပဲအချက်အလက်နဲ့ သက်သေပြပြ … အရီးမှားတယ်..ကောင်းကင်ပြာလေးလဲမှားတယ်… အသဲလေးပဲ မှန်တယ်… အငိငိငိ
ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်မှာ ရန်ကုန်မြို့ကလွဲရင် အစိမ်းရောင်တွေ အများကြီး တွေ့ရပါတယ် .. နွေခေါင်ခေါင်အချိန်တောင်မှ အညာမြေက စိမ်းနေတာ …
ကျနော်က ရှေ့နေ ပါ မေ … ( အဟိ )
အဖေ ကတ်ပီတန် သား အက်ဖက်အို ၊ အဖေ ကတ်ပီတန် သား ကတ်ပီတန် တွေ ဆို များ မှ များ
ခေး လေး ကိစ္စ ကတော့ ကိုဆောရိုး ကြီး ပဲ လွှဲ လိုက် တော့ မယ်
.ရွှေပြည်ကြီးမှာတော့ တောင်ပေါ်ရောမြေပြန့်ပါ အစိမ်းရောင်ရှားနေပါပြီ
အစိမ်းရောင်တွေကြား မွေးဖွားခဲ့တဲ့ တောင်ပေါ်သားပါ
ဒါပေမယ့် အခုတော့လည်း ဇာတိမြေမှာ အညိုရောင် တောင်ကတုံးနဲ့
ဧရာမြစ်ရေ ရွှံ့ဝါရောင်တို့ပဲ ရှိပါတော့တယ် ၊
စဂါးမစပ် လိန်ဗျံမှူးမလေးက အနော်နဲ့ ပတ်သက်ဘူးနော်
ကျွန်မ နေခဲ့တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းမှာလဲ စိန်ပန်းနီနီတွေ ပွင့်ရင်
မှတ်ချက်လေးကို စိမ်း လိုက်ပါတယ် အဘဖော။
Professional ethics မှာ ဆဲလ်ဖီ မရိုက်ရလို့မှ မပါတာ ။
ဆဲလ်ဖီဆိုလို့ လွန်ခဲ့သော ၃-နှစ်ကျော်က Cathy Pacific မှာ…
ဆဲလ်​ဖီနဲ့ ​အေဗီ​ရေးယှင်း လားလားမှ မသက်​ဆိုင်​
နာ့ ဂို အတော် စွဲလန်းး နေရှာဂိုးးးး
ရုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပုတ်ကောင်လေး ….
စိတ်ဝင်စားသူများ ဒီ ဆောင်းပါးလေး တွေ ကြိုဖတ်ထားပေါ့။
including laptops and mobile phones while on duty in the cockpit unless the purpose of using such devices is directly related to the operation of the aircraft or emergency, safety-related or employment related communications.
These rules further restrict the ability for pilots to use these devices, placingacomplete ban on personal use of such devices while pilotingacommercial aircraft.
You hear that phrase all the time from people addicted to posting pictures of themselves on social media. But whileadigital self-portrait might be fine at home or onanight out with friends, it is not OK in the cockpit ofaplane. In fact,
the Federal Aviation Administration bans commercial airline pilots from using laptops, cell phones and other electronic devices while they’re on duty,
YANOFSKY: You know, I’m pretty comfortable stepping onaplane. I flyalot.
But the real concern with any industry isaculture of rule-breaking. And you don’t want to have any profession looking at the laws that govern them and saying, oh, this set of them doesn’t have to apply to me.
ကိုယ်တွေလဲ တွေ့မရှောင်ထင်ရင်ထင်သလို ဆဲဖီထဆွဲတတ်သူမို့ ဟို နူးဘာဂိုဏ်းဘက်က နေရင်ကောင်းမားးးး
. ဒေါ်ဝေါင်း၊ ဒေါ်ပုခ်ျ်၊ ဒေါ်ဇီ
သများ သိုးဆောင်း တွေ ကို ဘူမှ ဆက်မပြောတော့လို့ သများ လဲ ရပ်ပါပြီ။